Trafika zavaboahary: manaitra ny tsy miankina ny AVG | NewsMada
Manao antso avo ny mpandraharaha sy ny orinasa tsy miankina malagasy sy vahiny ny fikambanana Alliance voahary gasy (AVG), manoloana ny fandripahana sy ny fivarotana ary ny fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary eto Madagasikara.
Anisan’ny notanisain’ny AVG ny fandripahana ny ala hanaovana saribao any Tsaramahazo, ao anatin’ny Valanjavaboahary Ankarafantsika (Boeny), ny fambolena katsaka sy voanjo ary ny fitrandrahana hazo sarobidy any amin’ny Tahirinjavaboahary Menabe Antimena, sy ny Allée des baobabs any Morondava, miampy ny fanaovana saribao tsy ara-dalàna manerana ny Nosy. Eo koa ny fandoroana ny Tahirin-javaboaharim-pirenena any Ranomafana (Ambatovaky, Aahavondronina), hanapahan’ny mpitrandraka vaventy ny hazo sarobidy. Manampy izany, ny fitrandrahana safira any Beampy Didy (Ambatondrazaka) ao anatin’ny faritra arovana CAZ.
Iaraha-mahalala ny fitrandrahana vato sarobidy sy fanaovana saribao tsy ara-dalàna ao amin’ny alan’i Maromizaha Andasibe. Santionany ihany ireo, fa maro ny tranga toy izany eto Madagasikara, toy ny fitrandrahana volamena na vato sarobidy manerana ny faritra maro.
“Aoka ianareo tsy handray ny vokatr’ireo fandripahana ny harena voajanahary ireo, satria tsy ao anatin’ny soatoavin’ny Orinasa tompon’andraikitra (RSE), sady miendrika famotsiam-bola izany ary fahotana mahafaty mamono ny taranaka malagasy”, hoy ny fanambaran’ny AVG.
Etsy ankilany, isaoran’ny AVG, ny ezaka nataon’ny tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny niara-niasa tamin’ny fiarahamonim-pirenena (OSC) toy ny nahatrarana ireo mpanao trafika sokatra aman’alina tany Atsimo Andrefana. Teo koa ny fanenjehana sy ny fanakanana ilay sambo saika hanondrana andramena tany avaratra atsinanan’ny Nosy (Maroantsetra) tamin’ny andron’ny fifidianana farany teo.
Tokony hahalala menatra
Milaza koa ny AVG fa olona sy firenena mahalala menatra ny Malagasy ka tokony hanova famindra raha mbola manana hambom-po na kely aza. Mba hanova ny laza ratsy antsika toy ny fifosan’ny iraisam-pirenena an’i Madagasikara, fa “firenena tompondaka eran-tany amin’ny fandripahana ala tamin’ny taona 2017, mirefy 517.000 ha, araka ny tatitry ny Global forest watch”.
Miandry ny filoham-pirenena vaovao hitondra an’i Madagasikara hiasa azo tsapain-tanana manoloana ireo ny AVG sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny olom-pirenena tsy ankanavaka.